Ny kinova vaovao an'ny Kobo Aura H2O dia ofisialy izao | Ireo mpamaky rehetra
Ny kinova vaovao an'ny Kobo Aura H2O dia ofisialy izao
Villamandos | | kobo, About us
Kobo, miaraka amin'i Amazon, dia iray amin'ireo mpanamboatra lehibe eo amin'ny tsenan'ny boky elektronika. Mba hiezahana hahazo lanja eo amin'ny tsena, tato anatin'ny ora farany dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny sampana Rakuten a kinova vaovao an'ny Aura H2O, izay tsy niova ny anarana, fa misy vaovao tena mahaliana.
Hatramin'izao, Kobo dia nanana ny Aura H2O sy Aura One hita eny an-tsena, izay nakan'izy ireo toetra marobe ho an'ity kinova vaovao an'ny Aura H2O ity, toy ny faritra madiodio, izay manome antsika fihazonana tsara kokoa na ilay asa ComfortLight PRO. Ity eReader vaovao ity dia efa nanjary teo an-tananay ary afaka andro vitsivitsy dia hasehonay anao ny famerenana mandinika izay ahafahanay manombana ity boky elektronika vaovao ity amin'ny fatra sahaza azy.
Amin'izao fotoana izao, ny fifandraisanay voalohany dia milaza amintsika fa ny Aura H2O vaovao dia niova kely tamin'ny resaka famolavolana, na dia ampidirina ao anaty lamosina aza ny firafitra henjana, izay ahafahana mifikitra tsara kokoa, ary efa hitantsika tamin'ny fitaovana hafa an'ny Kobo. Ho fanampin'ny zokiny lahy, izy io koa dia mandova ny asan'ny ComfortLight PRO izay ahafahantsika mahazo hazavana tsara indrindra arakaraka ny ora amin'ny andro. Ohatra Ny jiro avoakany dia tsy hitovy raha amin'ny alina noho ny amin'ny antoandro, izay tena mahasoa amin'ny masontsika..
Iray amin'ireo fiasa mahaliana indrindra amin'ity Kobo Aura H2O ity, izay azontsika natao batemy tamin'ny solon'anarana 2017, ny fanoherana ny rano, noho ny fanamarinana IPX68. Io dia ahafahantsika mando fotsiny ny eReader, fa koa manondrika azy hatramin'ny roa metatra ambanin'ny rano mandritra ny 60 minitra. Ao amin'ny kinova Aura H20 teo aloha dia tsy maintsy nanorim-ponenana tamin'ny mari-pankasitrahana IP67 izahay, tena hita ao amin'ny fitaovana finday maro eny an-tsena.
Ny fahafaha-mampiasa ny fitaovantsika ohatra amin'ny koveta fandroana, amin'ny pisinina na amoron-dranomasina, tsy misy atahorana, dia zava-baovao sy fanavaozana lehibe raha oharina amin'ny Amazon's Kindle, izay ankehitriny no mpanapaka lehibe eo amin'ny tsena ka tian'ny Kobo miady, ary mazava ho azy mahazo tany tsikelikely.
Fanatsarana iray hafa izay ho hitantsika amin'ity kinova Kobo Aura H2O vaovao ity ny tahiry anatiny izay nitombo tamin'ny 4GB ka hatramin'ny 8GB, izay hahafahantsika mitahiry boky mbola betsaka kokoa amin'ny endrika nomerika. Tsy isalasalana fa tsy zava-baovao lehibe io satria ny fitahirizana dia tsy olana amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa eReader, fa tsy misy fitehirizana anatiny intsony, amin'izay mety hitranga na mety hilaina.
Kobo Aura H2O dia manasongadina sy famaritana
Manaraka izany, averinay dinihina ny Kobo Aura H2O tena fiasa sy famaritana;
Fampisehoana 6.8 santimetatra miaraka amin'ny ranomainty 265 dpi
8GB fitehirizana anatiny izay ahafahantsika mitahiry ebook hatramin'ny 6.000
Fomban-kevitra tohanan'ny: EPUB, EPUB3, PDF na MOBI
Fifandraisana: Wi-Fi 802.11 sy Micro USB
Ny Kobo Aura H2O vaovao izay nohamafisin'ny sampana Rakuten hamely ny tsena any amin'ny firenena maromaro, ao anatin'izany i Espana, amin'ny 22 Mey. Ny vidiny ofisialy dia 179.99 euros ary azo vidiana amin'ny fivarotana lehibe, magazay manokana ary amin'ny ankamaroan'ny fivarotana nomerika izany.
Ahoana ny hevitrao momba an'ity Kobo Aura H2O 2017 vaovao ity izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, amin'ny forum na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » kobo » Ny kinova vaovao an'ny Kobo Aura H2O dia ofisialy izao
saturnino jimenez dia hoy izy:
namana villamando amam-bolana aho manana kobo aura ho an'ny tsiro ny ebook tsara indrindra taorian'ny sony ny boky ao amin'ny tranomboky kobo dia teknika tena tsara ary mamaky tsara ny epub u pdf amin'ny ankapobeny vakio tsara, na dia sarotra aza ny mifehy ny zoom ho fisalasalana: ny endrika kobo dia tsy azo afindra amin'ny folder amin'ny pc, misy mahalala ny fomba hanaovana azy?
Mamaly an'i saturnino jimenez
Tsy misy ifandraisany amin'ny endrika Kobo izany. Izy io dia tsy misy ifandraisany amin'ny DRM navoakan'ny mpanonta. Rehefa misy DRM dia tsy azo adika tahaka an'io izy ireo. Mila mampiasa rindrambaiko (Kobo, Adobe na Caliber) ianao.
patron 58 dia hoy izy:
Nandritra ny fotoana kelikely dia nampiasa ny Kobo Aura aho (tany am-boalohany) ary toa azo ekena kokoa izany, hitako ihany ny lesoka fa tsy navelan'ilay rindrambaiko hamaky ny endrika epub tamin'ny fomba maoderina, raha manana fonony misy fonony ianao dia mahazo aina kokoa, satria miankina amin'ny latabatra rehetra.
Efa "nanitsy" an'ity olana ity ve ianao?
Valiny amin'ny patroclo58
Fantaro amin'ny halaliny ny Nubico Premium ary tadiavo ny fomba hanandramana azy maimaim-poana
Amazon dia mankalaza ny Herinandron'ny Book amin'ny fanomezana antsika fihenam-bidy 20 euro amin'ny Kindle Voyage sy ny Kindle Paperwhite